Go’aanadii laga soo saaray shirkii lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa lahorgayn doonto Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Go’aanadii laga soo saaray shirkii Arbacadii lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay Xukuumaddu bidhaamisay inay horgayn doonto Baarlamaanka Federaalka Somaliya.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa wuxuu daboolka ka rogay in go’aanada ay taageertay Beesha Caalamka la gayn doonto Xarunta Golaha Shacabka, si Baarlamaanka taageero looga helo.
Xildhibaanada qaarkood, ayaa si xoogan kaga biyo diidan go’aanadaasi oo sida la sheegay ahaa mid ka yimid Dowladda, markii Madaxda Somalidu ay hal mowqif ka qaadan waayeen doorashada lagu wado in sanadkan ay ka dhacdo dalka.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya oo la hadlay VOA, ayaa xaqiijiyay in go’aanaasi ay ka yimaadeen dhinaca Dowladda, ka gadaal markii sida uu sheegay ay Madaxda Somalidu isu khilaafeen in go’aan lagu mideysan yahay ay gaaraan.
Dowladdu waxay qaraar ku gaartay in Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya lagu soo xulo nidaamka awood qaybsiga beelaha ee 4.5, halka Xubnaha Aqalka Sarena lagu soo xulo heer gobol, iyadoo ay xubno ku yeelanayaan Maamul Goboleedyada ka jira dalka.
Ra’iisal Wasaare Sharmaarke oo ka hadlaayay diidmada Puntland ee 4.5, ayaa ku waramaaya in Puntland ay dooneyso nidaam heer deegaan ah, kaa oo sida uu sheegay aanay weli Puntland ka hirgelin deegaanadeeda, iyadoona uu muujiyay inaanan la joogin waqtigii uu dalka ka dhici lahaa doorasho heer deegaan ah.
Sharmaarke oo ka hadlaayay baahida keentay inay qaataan hannaanka 4.5, ayuu sheegay inay ka cararayeen inay ka sii darto xaaladda adag ee dalku uu maraayo, xalna ay u arkayn 4.5.